Mayelana NATHI | IJoopzy iyisitolo esikhulu kakhulu esiku-inthanethi iningi lezidingo zakho
Jabulela Ukuthengiswa Kwehlobo! IKHODI LOKUFUNDA: "Summerale"
Isiqinisekiso sezinsuku ezingama-30 sokweneliseka ngeMali Back Uma ungenelisekile ngemikhiqizo yakho sizokhipha imali ephelele, akukho mibuzo ebuzwayo.
Kudlule ama-oda athunyelwe ngo-28.775 Senze amakhasimende amaningi ajabule njengama-oda amaningi esiwathumele. Kumelwe ujoyine umndeni wethu omkhulu.
Siyakwamukela ku JOOPZY. Usanda kuthola omkhulu kunabo bonke isitolo se-inthanethi iningi lezidingo zakho. Dlulisa amehlo kuwebhusayithi yethu futhi uhlale ubukele abezindaba zethu zenhlalo ukuze uthole amathuba amahle wesaphulelo. Sihlala sithengisa imikhiqizo ukwenza impilo yakho ibe ngcono kakhulu.
JOOPZY yinkampani eneminyaka engu-8 ubudala ethenga abantu online kwimikhiqizo ehlukahlukene yezimboni. JOOPZY yinkampani ezimele ngokuphelele ngakho-ke ukwethembeka kwethu kuphela kungokwabathengi bethu, senza konke okusemandleni ethu ukukhonza amakhasimende ethu ngokugcwele. Sikholelwa ukuthi ukwethembana phakathi kwethu kubaluleke kakhulu.
Sizwa inhlanhla enkulu oyikhethile Joopzy.com ngokwenza ukuthenga online! Zizwe ukhululekile ukuxhumana ne JOOPZY nganoma yisiphi isikhathi!
IMIBHALO YOKUZIPHATHA KAKHULU